गाेदावरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीलाई कालाेमाेसाे दल्ने तयारी ! « Bagmati Online
गाेदावरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीलाई कालाेमाेसाे दल्ने तयारी !
बागमती अनलाइन गोदावरी प्रतिनिधि
ललितपुर, ३ असार | ललितपुर जिल्लाको महत्वपूर्ण स्थानीय तह हाे गोदावरी नगरपालिका । विगत दुई वर्षदेखि यही नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखकाे जिम्मेवारीमा रहेका छन् कृष्णप्रसाद जैशी । लामाे समयसम्म सरकारी सेवामा काम गरेका जैशीकाे कार्यशैलीलाई लिएर गाेदावरीका नगरवासीहरु भने रुष्ट बनेका छन् । गाेदावरी नगरपालिकाकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएदेखि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीले सेवाग्राही प्रति राम्रो व्यवहार गर्न नसकेको स्थानीयहरुले आराेप लगाएका छन् । प्रशासकीय अधिकृत जैशी गोदावरी नगरपालिकामा २०७५ भदौमा सरुवा भएर आएका थिए । जैशी नगरपालिकामा सरुवा भएर आएदेखि नै नगरपालिकाकाे कार्य सञ्चालन र बिकास योजना सञ्चालनमा अनियमितता हुने गरेकाे वताउछन् वडा नं. १० का एक स्थानीय वासिन्दा । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद जैशीको कार्यशैली र सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार दिन प्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ ।
नगरपालिकामा आगमन भएदेखि नै अधिकांश याेजनामा भएको आर्थिक अनियमिततामा जैशीकाे नाम जाेडिदै आएकाे छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीले नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुसंग समेत सुमधुर सम्बन्ध राख्न नसकेको आराेप लाग्दै आएको छ । अधिकाश ठेक्का योजना, उपभोक्ता समिति र दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत आर्थिक चलखेलमा मुछिएकाे गुनासो आम नागरिकले गर्ने गरेका छन । नेकपा निकट कर्मचारी सङ्गठनको छत्रछाँयामा शक्ति केन्द्र धाउँदै स्थानीय निकाय चहार्ने कृष्ण प्रसाद जैशी यो भन्दा पहिला पनि विवादमा तानिएका थिए । ठोरी गाउँपालिकाको तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचारको आराेप लागे पश्चात् त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए । जैसी गोदावरी नगरपालिका आएदेखि नै नगरभित्रका प्रत्येक प्लटिङ्ग हाउजिङहरुसंग रकम असुल्ने गरेकाे जन गुनासो छ । उनले गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १० स्थित डाँडागाउको प्लटिङ्ग गर्ने व्यक्तिसंग कमिशन स्वरुप दुई वटा कित्तामा रहेकाे ९ आना जग्गा छोरी र श्रीमतीको नाममा पास गरेको स्राेत बताउँछ । त्यस्तै गोदामचौर, झरुवारासी , टाहाखेल लगायतका ठाउँमा भएका प्लटिङ्गहरुबाट समेत अवैध रकम असुल्ने गरेको जनगुनासो छ ।
जैसीले गोदावरी नगरपालिकाको प्रमुख आयश्रोतको रुपमा रहेको ढुङ्गा खानी क्रसर ब्यबसायीहरुबाट पनि रकम असुल्ने गरेकाे आराेप लाग्दै आएको छ । देबिचौर, नल्लु क्षेत्रमा मापदण्ड बिपरित रहेका ढुङ्गाखानी क्रसर व्यवसायीसंग रकम उठाउने गरेको आराेप उनिमाथि लाग्ने गरेको छ । नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर गजेन्द्र महर्जन बोर्डमा अल्पमतमा परेको परिस्थितिको फाईदा उठाउदै उनले क्षेत्र नम्बर १ र ३ बाट निर्वाचित सांसद र नगरमा नेकपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष ,बोर्ड सदस्यको सल्लाह र निर्देशनमा नगरपालिकालाई फेल गराउने गरि कार्य गरेको आराेप समेत उनी माथि लाग्दै आएको छ । आम नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न ३ महिना अघि तत्काल सरुवाको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएकाे थियाे । प्रदेश सांसद चेतनाथ सन्जेलको सक्रियतामा सरुवा रोकिएपछि उनको चकचकी अझै बढेको छ ।
जैसी सांसद सञ्जेलसंग निकट रहेकाे एक स्थानीयले बागमती अनलाइनलाई बताए । जैसीले गोदावरी नगरपालिकाको बोर्ड बैठकको गोप्य कुरा समेत सांसद सञ्जेललाई सुनाउने गरेको नेकपा कै वडा अध्यक्ष बताउछन् । जैसीको हर्कतले भ्रष्टाचारको सीमा नाघेको कारण यतिखेर स्थानीय जनता निकै आक्रोशमा छन्। जुनसुकै योजनामा पनि उपभोक्त समिति र ठेकेदारसंग बिल पास हुनु भन्दा पहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जैशीलाई नजराना बुझाउनु पर्ने पीडित एक ठेकेदार बताउछन् । जैसीकाे यस्तो कार्यशैली देखेर स्वयम् नगरपालिकाका कर्मचारी समेत रुष्ट छन् । जैशीकाे कार्यशैलीबाट रुष्ट वडा नं१० र ११ का स्थानीय जनताहरुले जैसीलाई कालोमोसो दल्ने तयारी गरेको स्थानीय श्याम महर्जनले बताए।
लकडाउनमा प्रदर्शन गरे ६ सय जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद !
कोरियन भाषा परीक्षा अनिश्चित, यो वर्ष पास हुनेको सङ्ख्या पनि घट्ने
आफ्नो मातृभूमिको सम्पूर्ण भू-भाग सहितको नक्सा विश्वसामु प्रस्तुत गर्नु सह्रानीय कार्य : पूर्वराजा शाह